ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်ခုန်သွားစေမယ့် အတွင်းသားလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Let Pan Daily
ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်ခုန်သွားစေမယ့် အတွင်းသားလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ပရိသတ် ကြီးရေ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ ညို့အား ပြင်းပြင်း နဲ့ ရင်ခုန် စရာ ကောင်းလောက် အောင် ဖမ်းစား ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သွန်းဆက်လေး က တော့ လွတ်လပ် ပေါ့ပါး တဲ့ အလန်း စား ဖက်ရှင် လေး ကို ဝတ်ကာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရား တွေကို ပေါ်လွင်အောင် အထာ ကျကျ ပို့စ်ပေး နေတာ ဖြစ် ပါ တယ် … ။သူမ ဟာ နာမည် ရ မင်းသမီး တွေ ထဲက တစ်လက် ဆိုလည်း မမှား ပါဘူးနော် ။ ဗီဒီယို တွေ ခေတ်စား ခဲ့တဲ့ ကာလ မှာလည်း ပရိတ်သတ် တွေ တစ်ခဲ နက် အားပေး မှု ဝန်းရံမှုတွေကို ရရှိခဲ့တာ ပါ … .
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ သွန်းဆက် က တော့ အမိုက် စား ခန္တာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအ လှတွေ နဲ့ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက် တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါ တယ်..။ ယခု တစ်ခါမှာ လည်း သွန်းဆက် က ပျိုမဒီလေးတွေ အပြင် ပရိသတ် တွေ ဆက်ဆီ ကျကျ ရိုက်ထား တဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာတင်ပေး လာခဲ့ ပါတယ် … ။ ဒီပုံလေး တွေ နဲ့ လည်း သွန်းဆက် က ချစ်စရာ ကောင်းလောက်အောင် လှရက် လွန်းနေတာလဲ ဖြစ်ပါ တယ် … ။
ပရိသတ္ ႀကီးေရ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း နဲ႔ ရင္ခုန္ စရာ ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ ဖမ္းစား ထားတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး သြန္းဆက္ေလး က ေတာ့ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါး တဲ့ အလန္း စား ဖက္ရွင္ ေလး ကို ဝတ္ကာ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွတရား ေတြကို ေပၚလြင္ေအာင္ အထာ က်က် ပို႔စ္ေပး ေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။သူမ ဟာ နာမည္ ရ မင္းသမီး ေတြ ထဲက တစ္လက္ ဆိုလည္း မမွား ပါဘူးေနာ္ ။ ဗီဒီယို ေတြ ေခတ္စား ခဲ့တဲ့ ကာလ မွာလည္း ပရိတ္သတ္ ေတြ တစ္ခဲ နက္ အားေပး မႈ ဝန္းရံမႈေတြကို ရရွိခဲ့တာ ပါ … .
ပရိတ္သတ္ ႀကီးေရ သြန္းဆက္ က ေတာ့ အမိုက္ စား ခႏၲာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္းအ လွေတြ နဲ႔ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္ တဲ့ မ်က္ႏွာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားပါ တယ္..။ ယခု တစ္ခါမွာ လည္း သြန္းဆက္ က ပ်ိဳမဒီေလးေတြ အျပင္ ပရိသတ္ ေတြ ဆက္ဆီ က်က် ႐ိုက္ထား တဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚမွာတင္ေပး လာခဲ့ ပါတယ္ … ။ ဒီပုံေလး ေတြ နဲ႔ လည္း သြန္းဆက္ က ခ်စ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လွရက္ လြန္းေနတာလဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။